Xulka Spain oo Afka Ciida loo Darey Turikiga oo Czech Rebuplic Dhibcaha Ka Qaatay Germalka oo Badiyay iyo Ukrain oo Ka Xir xiratay Euro 2016 ee France+Sawiro | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
Xulka Spain oo Afka Ciida loo Darey Turikiga oo Czech Rebuplic Dhibcaha Ka Qaatay Germalka oo Badiyay iyo Ukrain oo Ka Xir xiratay Euro 2016 ee France+Sawiro
Jun 22, 2016 - jawaab	Xulka Qaranka Spain ayaa wajahday kan Croatia waxaana caawa la dubtay Xulka Spain oo waxaa looga adkaaday 2 halka qaranka Spain uu la yimi hal gool oo qura.
Alvaro Morata ayaa ku daah furey goolkiisii 3aad kulanka caawa waxaana sidoo kale Xulka Croatia oo aan ka yareysan kan Spain ay barbareeyeen goolkaasi daqiiqadii 45aad waxaana u dhaliyay goolka Croatia Nikola Kalinic.
Spain ayaa isk khasaarisay gool ku laad xor ah waxaana taasi ay sababtay in markeeda shabaqa laga soo taabto daqiiqada marka ay ahayd 87 ee xili dhamaadkii ciyaarta waxaana goolkaasi guusha ah u dhaliyay xulka Qaranka Croatia Ivan Perisic oo gabi ahaanba caawa ka farxiyay Jamaahiirta reer Croatia.
kulamada Group D ee tartanka Qaramada Yurub iyadoo Spain ay ku soo baxday kaalinta labaad ee group-keeda halka Croatia ay si lama filaan ah ugu soo baxday kaalinta koowaad hadaba ayay la ciyaari doonaan wareega 16ka ee tartanka Euro 2016 Spain.
Xulka Spain waxa ay wajahayaan wareega 16ka xulka Talyaaniga oo kaalinta koowaad kaga soo baxay Group E, dabcana waxa uu noqon doonaa kulanka ugu adag ee wareega 16ka kooxood ee koobka Qaramada Yurub.
Xulka qaranka Itaaliya ayaa dhamaan wada badiyay kulamadii ay dheeleen waxaana shabaqa usoo galay xulka Spain oo isaguna difaacanaya koobka Yurub waxaana ciyaartaasi ay noqon doontaa ilaa haatan Ciyaarta ugu adag ee Euro 2016 ee Iminka soconaysa.
Ciyaarta Italy iyo Spain ee wareega 16ka waxa ay dhici doontaa maalinta isniinta 27ka Juun iyadoo ay ka dhici doonto magaalada caasimada ee Paris iyo garoonka Stade de France.
Xulka Qaranka Croatia oo si lama filaan ah ugu soo baxday kaalinta koowaad ayaa la ciyaari doona midkood kooxaha kaalimaha seddexaad ku dhameysta ee Group-yada B,E,F.
Dhanka kale Xulka Jarmalka ayaa ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group C iyagoo iska xaadiriyay wareega 16ka ee Euro 2016 ka dib markii ay kulankoodii ugu danbeeyay ee wareega group-yada ay 1-0 ku qaarjiyeen xulka Waqooyiga Ireland.
Mario Gomez ayaa kubad uu ka helay Müller dhex dhigay shabaqa waqoyiga Ireland waxaana sidaasi ay guusha ku raacday xulka qaranka Germalka.
Sidoo kale Xulka Poland waxa ay ciyaar adag la ciyaarey xulka Qaranka Ukraine oo ka haray tartanka Euro 2016 ee France iyagoo 1-0 diray ka dib gool uu daqiiqadii 54aad u dhaliyay Blaszczykowski,
Blaszczykowski ayaa bedel ku soo galay waxaana uu shabaqa dhex dhigay kubada taasoo gabi ahaanba ka nixisey Jamaahiirta Ukrain.
Waa markii ugu horeysay abid ay Poland ka soo gudbaan wareega group-yada Qaramada Yurub ka dib markii ay ku guuldareysteen 2008 iyo 2012.
Sidoo Kale xulka Turkiga ayaa guul weyn ka gaaray dhigooda Czech Republic iyagoo ku dubtay 2-0 laakiin taasi uguma filnaanin inay kaalinta 3aad ku soo baxaan, waxaana ay u baahnaayeen inay ugu yaraan 4-0 ku badiyaan si ay booska uga galaan Northern Ireland kuwaasoo haatan iska xaadirinaya wareega 16ka.
Turkiga weli rajadooda ma aysan dhiman, laakiin Albania ayaa si rasmi ah u hartay. Haddii Belgium iyo Italy ay ka fogaadaan in laga badiyo berrito, ka dib afarta kooxood ee kaalimaha seddexaad ee soo baxaya waxa ay noqonayaan Slovakia, Northern Ireland, Turkey iyo xulka kaalinta 3aad ku dhamaysta Guruubka F.
Euro 2016 France by Umadanews.com..